Somaliland: Wadahadalka Somaliland Iyo Soomaaliya | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Somaliland: Wadahadalka Somaliland Iyo Soomaaliya
Somaliland: Wadahadalka Somaliland Iyo Soomaaliya
Waxaa beryahan dambe socday dhaqdhaqaayo faro badan oo asxaabta caalamigu ku raadinayaan sidii Somaliland iyo xukuumad day laga dhisay Muqdisho, in la is horkeeno, si uu wadahadal u dhexmaro.
Marka ugu horeysa, Waxaa wadahadli kara laba dawladeed oo shacabkooda soo doorteen. Markaa Madaxweyne Muuse Biixi waa la soo doortay, ée yaa doortay Farmaajo?
Mida labaad, maxaa lagala hadlaa siyaasiyiinta maanta Xamar ka taliya, waa kuwii la iska xorreeyey oo aan biyo is marin. Waa dad aad cidna waxba u ogaleyn, oo aad moodid in xaq loo siiyey xukunka dadka.
Ma dadka is hortaagay horumarka dhaqaalaha dadka iyo dalka Somaliland baa lala xaajoonkaraa? Horumarinta dekedda Berbera waxay keeni doonta shaqo abuur dheef u keenaya dhamaan dadka deggan Geeska Afrika. Lakiin, waad ogeydeen wixii ka yeedhayey siyaasiintaa Xamar fadhiyey.
Dadbaa yidhaahdo, ha la kala saaro siyaasada iyo xidhiidhka caadiga ah. Saxiibayaal, Somaliland wixii quseeya waa siyaasad. Wixii shalay kugu dhacay haddaanad cashar ka qaadan, berrina kugu dhac, saa’dambe kugu dhac,..
Hadaba maxaa talo ah? Waa mid aan la dafiri karin, Somaliland iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah. Waxaa weligood ka dhaxeyn doona xidhiidh ganacsi, bulsho iyo dhaqan, lakiin, xidhiidh siyaasideed ma dhici karo, mana dhici doono.
Shaqsiga caashaqsan Xamar, ee is leh waxbaa ku yaal ama waa lagu doonayaa, waxaan leeyahay, orod oo iska xaadiri, markaad ka soo carartid baynu is wareysan. Kumaanku baa tagay oo ku soo hungoobay, qaarna, Eebe ha u naxariistee, may soo noqon.
Somaliland iyo Soomaaliya waxay ka wada hadli karaan xidhiidhkooda mustaqbalka ee quseeya ganacsiga, bulshada iyo dhaqanka, lakiin dhanka siyaasada, waxba iskuma keen hadhin.
Previous articleNina Sharciga iyo Dastuurka kama wayna, ha ahado Masuul ama Shaqasi, Yuuuf Garad oo ka hadlay madax adayga farmaajo
Next articleGudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Oo Iminka Hadley War Cusub-na Ku Dhawaaqey